‘आज एमाले र देशलाई जिताउन जुटौं, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भोली गरौंला’ |
‘आज एमाले र देशलाई जिताउन जुटौं, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भोली गरौंला’
प्रकाशित मिति :2017-09-06 13:07:24
एमाले भ्रातृसंगठन युवा संघ नेपालमा नवौँ महाधिवेशन तयारी विषयमा फेरि विवाद चर्किएको छ । बुटवलमा ०६९ फागुनमा आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भययता नवौँ महाधिवेशन हुन सकेको छैन । बुटवल महाधिवेशनबाट महेश बस्नेत संघको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसयता महाधिवेशनबिनै निरुदेवी पाल र राजीव पहारी संघको अध्यक्ष बनिसकेका छन् । ०७२ कात्तिकमा अध्यक्ष बनेका पहारीले फागुन अर्थात् चार महिनाकै बीचमा विधानतः महाधिवेशन गराइसक्नुपर्ने भए पनि अझैं महाधिवेशनको मिति टुंगो भएको छैन । महाधिवेशनको मिति पछिल्लो पटक असोजमा तोकिएको थियो । तर, त्यो महाधिवेशन पनि नहुने संकेत प्रष्ट देखिएको छ । असोजमै महाधिवेशन नहुने देखिएपछि राजीव पहारी पक्षका पदाधिकारी र सदस्यहरु पनि उनको बिरोधमा उत्रिएका छन् । युवा संघको विवाद बारेमा उपाध्यक्ष चन्द्र लामासँग गरिएको कुराकानी :-
फेरि पनि युवा संघ नेपालमा भाडभैलो सुरु भयो नी ?
-त्यस्तो भाडभैलो केही पनि भएको छैन । महाधिवेशनको बिषयमा सामान्य छलफल र बसह मात्रै हो । लामो समयदेखि महाधिवेशन हुन सकेको छैन । अब महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबैको एकमत छ । त्यसमा दृढ छौं । समयमा महाधिवेशन नहुदा नेतृत्व बिकासमा मात्रै होइन समंग्र आन्दोलनमा समेत केही असर परेको सत्य हो । तर, हामीले नचाहेर महाधिवेशन नभएको भने पटक्कै होइन । राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचनहरुले गर्दा हुन सकेको छैन । अब सकेसम्म चाडैं महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको मत हो ।
नयाँ तोकिएको मितिमा पनि महाधिवेशन नहुने लगभग निश्चित जस्तै छ, यसपछि सबै पदाधिकारीहरु आक्रोशित छन् । तर, तपाई चहिँ मौन हुनुहुन्छ रे । के मिति सार्नका लागि मौन सहमति जनाउनुभएको हो ?
-त्यस्तो होइन । हामी पदाधिकारी सबै जिम्मेदार छौं । हुनुपर्छ । तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं । तर, यति भनिराख्दा हामीले हाम्रा सामुन्नेका अवस्था र परिस्थीतिहरुलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ । महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्नका लागि अहिले नै देखि सबै खालका तयारी गर्न पर्ने हुन्छ । स्वाभाविक रुपमा प्रतिस्पर्धाका सवालहरु पनि हुन्छन् । यता फेरि असोज २ मा प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन छ । त्यो एमालेको लागि मात्रै होइन राष्ट्रलाई माया गर्नेहरुको लागि प्रतिष्ठाको बिषय छ ।
प्रदेश नम्बर दुईमा एमाले पराजित भयो भने राष्ट्रलाई माया गर्नेहरु पराजित हुने हो । यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रतिष्ठाको निर्वाचन हो । अर्कोतिर मंसिरमा प्रदेशको निर्वाचन हुदैछ । यस्तो संगिन अवस्थामा हामी महाधिवेशनको तयारीमा जाने की पार्टीलाई जिताउन निर्वाचनको तयारीमा ? आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जिताएला हारिएला त्यो सामान्य कुरा हो । तर, अहिलेको सवाल भनेको नेकपा (एमाले)लाई जिताउने हो, मुलुकलाई जिताउने बेला हो । मेरो भनाई अहिले एमाले र देशलाई जिताउन लागौं, त्यसपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरौंला । देश र पार्टी समृद्ध भए हाम्रो भबिष्य यसै समृद्ध हुनेछ ।
समयमै महाधिवेशन नहुदा नेतृत्व बिकासमा निकै ठुलो क्षती भयो नी होइन र ?
-हो, निश्चित रुपमा भएको छ । तर, यसका दोषी नेतृत्वका हिसाबले हामी सबै हौं । कमजोरीहरु नभएका होइन भएका छन् । अब विगतलाई गाली गरेर मात्रै पनि भएन । अब विगतको गल्ती र कमजोरीबाट सिकेर अघि बढ्ने हो । यसबिचमा युवा संघले जे काम गरेको छ । त्यति दुःख मान्नुपर्ने केही पनि छैन । हामीले निकै राम्रा र गौरवपूर्ण कामहरु गरिरहेकै छौं । अब हाम्रो संरचना बदलिएको छ, शासकीय स्वरुप बदलिएका छन् । अब हामीले पनि युवा संघलाई बदलेर लैजानुपर्छ ।
प्रदेश नम्बर दुईको स्थानीय तहको निर्वाचनमा युवा संघको भुमिका के रहन्छ ?
-मैले अघि पनि भने यो केवल एमालेको हार जितको कुरो होइन । यो राष्ट्रको जित र हारको बिषय हो । आज एमाले बिरोधी होइन नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान बिरोधी शक्तिहरु एमाले बिरुद्ध महागठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा अघि आएका छन् । प्रदेश नम्बर दुईमा दुई शक्ति चुनाव लड्दैछ । एक देशलाई माया गर्ने, देशको पक्षधर, त्यो नेकपा (एमाले) हो । अरु, विदेशीको इशारामा एक भएका शक्तिहरु छन् । तिनिहरुलाई परास्त गर्नुछ । त्यसैले युवा सघंले सम्पूर्ण शक्ति प्रदेश नम्बर दुईमा लगाएको छ । हामी बढो सचेततापूर्वक देशलाई माया गर्ने मतदाताहरुको सुरक्षामा खटिन्छौं । म आफै बारामा खट्दैछु ।
त्यसो भए अब युवा संघ महाधिवेशनतिर होइन स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन तिर लाग्यो होइन त ?
-प्रदेश नम्बर दुईमा एमाले हार्यो भने देशले हार्छ, माटोले हार्छ । नेपाली माटो बिरोधीहरुलाई जसरी पनि हामीले पराजित गर्नुछ । त्यसलै सबै असन्तुष्टीहरुलाई एकातिर थन्काएर हामी सबै युवाहरु प्रदेश नम्बर दुईमा खट्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । हरेक सकेन्ड पार्टी र समयलाई दिने समय हो । सबैभन्दा पार्टीलाई पहिलो बनाऊ । देशलाई जिताऊ । अनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्दै गरौंला ।
कला क्षेत्रका लागि वैवाहिक जीवनको अन्त्य गरेँ : मिलन अमात्य
अग्निपरीक्षामा नेपाल पत्रकार महासंघ ?